साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ती श्रीमान जसको यी ६ गुण भएका युवतीसँग विवाह हुन्छ ! – List Khabar
Home / मनोरंजन / साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ती श्रीमान जसको यी ६ गुण भएका युवतीसँग विवाह हुन्छ !
साह्रै भाग्यमानी हुन्छन् ती श्रीमान जसको यी ६ गुण भएका युवतीसँग विवाह हुन्छ !
admin October 30, 2021 मनोरंजन Leaveacomment 143 Views
शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे थाहा पाउन सकिने कुराको वर्णन गरिएको पाइन्छ ।यसैको आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्य बारे थाहा पाउन सकिने धार्मिक मान्यता रहेको छ ।
शिव पुराणमा कुमार कार्तिकेयले मानिसमा यस्ता गुण बताएका छन् जुन गुण हुने ब्यक्ति सौभाग्यशाली, भाग्यमानी र राम्रो फल प्राप्त गर्छन् । सो उक्त पुराणमा भाग्यमानी कन्यामा हुने बाह्र गुणबारे उल्लेख गएिको छ । उक्त गुण भएका युवतीसँग विवाह गर्ने पुरुष पनि धेरै भाग्यमानी हुने कुराको उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
अनुहार उज्यालो : गोरो र चिल्लो भएका युवतीहरु धेरै भाग्यमानी हुने विश्वास गरिन्छ ।आँखीभौँहरु धनुष जस्तै झुकेका : आँखाका आँखीभौं जोडिएका युवतीलाई विश्वास गर्न नसकिने भनाई रहेको छ । यदि आँखामा रहेका आँखीभौँहरु धनुष जस्तै झुकेका भएमा त्यता युवतीहरुलाई धेरै भाग्यमानी रहेको ठानिन्छ ।
बुबासँग अनुहार मिल्ने युवती : कुनै पनि युवतीको अनुहार आफ्नो बुबासँग मिल्न जान्छ भने त्यस्तो अनुहार भएकी युवतीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुले जीवनमा सुख पाउने र उनीहरुले चाहेका हरेक सपना पुरा हुन्छन् ।
कालो लामो कपाल९कालो लामो कपाल शिरको आगाडितिर झुकेको कपाल हुने युवती भाग्यमानी हुन्छन् । हेर्दा आर्कषक चि’ल्लो, नरम कपाल भएका कन्यालाई अरु भन्दा उत्तम् मानिन्छन् ।
निधार ठुलो र शिरको अगाडीको भाग उठेको : जुन युवतीको निधार ठुलो र शिरको अगाडीको भाग उठेको हुन्छ त्यस्ता युवती धनी र भाग्यमानी हुन्छन् ।सिन्दुर लगाउने भाग सिधा र उठेको : जुन युवतीको सिन्दुर लगाउने भाग सिधा र उठेको हुन्छ त्यस्ता युवतीहरुलाई पनि भाग्यमानी मानिन्छ ।
Previous पुर्व राजाले चियापान गर्न बोलाए पछी सबै कलाकारहरु खुशी हुँदै जानुको खुल्यो वास्तविकता, अब के होला, ज्ञानेन्द्र के चाहन्छन ? (भिडियो सहित)
Next लोकसेवाले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेर विज्ञापन खोल्दै, मिति समेत तोकियो !